म सँगै रात बिताएर, किन मलाई नै बेश्या भन्छौ ? ~ FMS News Info
म सँगै रात बिताएर, किन मलाई नै बेश्या भन्छौ ?
यदी म बेश्या हुँ भन्ने थाहा पाए भने कतीपय पुरुशहरु भित्रभित्रै गद गद हुन्छन र मौका पर्यो भने फोन नम्बर माग्छन र निस्फिक्री फोन पनि गर्छन । कोठाको तारतम्य मिलाउछन र भने जती पैसा तिर्न तयार हुन्छन । कसैले नदेखी सकेसम्म माक्स लाएर कोठामा भित्रिन्छन अनि नाङ्गिन्छन । फेरि दुरुस्तै भएर बाहिरिन्छन मानौ केही भएकै छैन । अझ उसले मलाई नै बाहिर देख्यो भने उसको साथीलाई भन्छ “ओए हेर न उ.. त्यो बेस्या हो रे”
‘रे’ लगाईदिन्छ । मानौ उ दुध ले धोएको हो । उ म सँग सुतेकै हैन । र उ कहिल्यै बेस्या सँग जानै सक्दैन , उ ईज्जतदार हो । हो.. यहि हो पुरुशहरुको देखाउने दारा । जो सँग सुते पनि उ चोखो हुन्छ प्रमाण केही हुदैन । हुन त भगवान ले पनि नारीलाइ नै ठगेका छन । कसैसँग यौन सम्पर्क राख्नासाथ नारी कै भर्जिनिटि क्षय हुन्छ । पुरुश त जस्ताको त्यस्तै । फेरी पुरुश हरुलाइ बिबाह पुर्ब वा बिबाह पश्चात भोग गर्न चाही परस्त्री चाहिन्छ । अनि बिहे गर्दा चाही भर्जिन केटी चाहिन्छ , यो पुरुश हरुको अर्को लुकाउने दार्हा हो ! पुरुश हरुले महिला लाई खेलौना अथवा यौन शन्तुस्टी मेटाउने साधन भन्दा बढी केही सँझदै सँझदैनन ।
सडकमा हिड्ने जो सुकै केटीलाई पनि कसिलो नितम्ब र थाई देख्यो भने १२ बर्सको ठिटो देखी ७५ बर्षको बुढो सम्मले नियालेर हेर्छ ! बास्तब्मा हामिलाई पनि हेरिदिए हुन्थ्यो जस्तो नै लाग्छ । गुनासो सिर्फ यति हो कि पुरुशले पनि किन बेश्याको दर्जा पाउन सकेन ? किन महिलालाई मात्र दोशी मान्छ हाम्रो समाज ?
प्रकृतीले समागम कै लागी पुरुश र नारी बनाएको हुनुपर्छ । नत्र सबै पुरुश भए वा नारी भए नि भैहाल्थ्यो नि । यदी त्यसो हो भने सेक्सलाई मानिसले किन लुकाउछन ? बिहेको पहिलो रातको असह्य पिडालाई बिहान बुहारीले लुकाउन सक्दिनन् र टाङ फाड्दै हिडेको देखेर सबैलाइ थाहा पनि हुन्छ कि बुहारीलाइ गार्हो भै रहेको छ । तै पनि कसैले भन्न सक्दैनन कि ‘बुहारी तिम्रो गुप्ताँङ्ग दुखेको छ आराम गर ‘ भनेर । बरु भित्र भित्रै बुहारि लाई हेरेर गद गद भै रहेका हुन्छन । यो हाम्रो समाजको खराब पक्ष नै हो ।
भर्खरै को ताजा घटना एउटी गायिका , मोडल ज्योती मगर माथी ‘अभद्र ब्यबहार’ले सँचार माध्यम तातेका छन । के ज्योतीको अर्धनग्न शरिर नहेर्ने धृष्टता यो समाजका पुरुश ले गर्न सक्छन ? के ज्योतिका भिडियो हरु एभोईड गर्ने ताकत छ पुरुश हरुमा ? छैन । बरु उल्टै अहिले सबै भन्दा बढी युट्युब मा ज्योतिका भिडियो लाई क्लिक गरिन्छ । र उनका भिडियोको भ्यु यो साता मात्र करिब डबल भएको छ । यसको मत्लब पुरुश लाई उनी मन पर्छीन । फेरी किन ज्योती ठिक छन भनेर भन्ने आँट कुनै पुरुशमा छैन त ?
मैले सामाजिक सँजालमा खुब ठुला भनाउदा लेखक,कबी ,लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ती हरु, अफिसर हरु र केही कलाकारलाई समेत जोखेकी छु । मै सँग ईनबक्स मा भल्गर च्याट गरेर पब्लिकमा नारीको सँमान गर्नु पर्छ भन्ने आशयका लेखहरु लेख्छन । मलाईनै “स्तन को फोटो पठाईदेउ न” ? भनेर अनुरोध गर्नेहरु ज्योती मगरलाई गाली गर्दै स्टाटस अपडेट गर्छन आखिर कतिदिन सम्म कोखमा दार्हा बोकेर हिड्छौ पुरुश हरु ?
मलाई यौन ब्यबसाय गर्ने रहर छ भने म किन कसैसँग डराउने ? अझ जसले म सँग यौन सम्पर्क राख्छ उसै सँग किन म लुकेर हिड्ने ? मैले किन सँम्मान साथ यौन ब्यबसाय अपनाउन नसक्ने ? के यो देश अघोसीत पुरुश बेश्या हरुको मात्र बपौती हो ? यस्ता कैयन अनुत्तरीत प्रश्न छन जस्को उत्तर सबै लाई थाहा छ तर कोही बताउन चाहाँदैनन् । यदी मलाई यौनकर्मि हुन रहर लाग्यो भने मलाई कसैले रोक्न सक्दैन चाहे कानुन चाहे परिवार ।
मलाई थाहा छ यही मेरो लेखमा पनि पुरुस हरुले र केही लुकेर बेश्याबृती गर्दै बाहिर बाहीर महिला यस्तो हुनुपर्छ यस्ता लुगा लगाउनु पर्छ भन्दै महिलाकै ओकालत गर्ने छद्मभेशी हरुले भद्दा सब्द मा गालि गर्न सक्छन । तर मलाई त्यस्ता हरुप्रती सहानुभुती बाहेक केही छैन ।
जबसम्म पुरुशहरु र केहि महिला हरु समेत औपचारिकता को खोल ओढेर महिलालाई गालि गर्दै लुकेर नाङ्गो नाच हेर्छन र खुद बेश्याबृती गर्छन तब सम्म यो समाज अठारौ सताब्दीमा छ भनेर भन्दा फरक पर्दैन ।www.ejanata.com